1954-1964 Evinrude 5.5 HP Seahorse Tune-UP Project Lower Unit Izikhungo / Miselela Impeller Water Pump | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
1954-1964 Evinrude 5.5 HP Seahorse Tune-UP Project Lower Unit Izikhungo / Miselela Impeller Water Pump
Kuhlale kungumqondo omuhle ukufaka indawo yempepho. Ukuze ufike enqabeni, kufanele ususe ikhanda lamandla, unqamule ukuxhumana kwe-shift, bese ususa iyunithi engezansi. Ukususa ikhanda likagesi kuthathwa njengobuhlungu ngoba izinjini ezintsha azidingi lokhu, kepha akunzima kangako ngakho ungesabi. I-impeller ingenye yezingxenye ezibucayi kakhulu zemoto ngoba iyahluleka, ungayishisa kalula imoto, uyihlwithe ikhanda, noma ube nezinye izinkinga ezinkulu. Ungasho ukuthi imoto isike yashisa yini ngoba upende osekhanda lesilinda noma itheku lokukhipha uzoshiswa. Lapho ugijima, kufanele ubone inani elihle lamanzi elichichima ngaphandle kweyunithi ephansi. Uma ungaboni amanzi ephuma kuyunithi engezansi, vala imoto phansi bese ufaka indawo yempepho ngaphambi kokuyisebenzisa futhi. Kufanele futhi ukwazi ukuthinta ikhanda lesilinda ne-crankcase ngeminwe yakho futhi ungashisi. Ama-motors amasha ane- "telltale" ezokubonisa ngokubonakalayo ukuthi ubona amanzi "achama" ngembobo ekhasayo engezansi. Lawa ma-motors amadala awanayo i- "telltale," ngakho-ke kufanele ubheke phansi yonke emuva ngemuva kweyunithi engezansi ukuze ubone amanzi ephela.
Impeller Inombolo yengxenye ye-OMC 434424 NAPA / Sierra Ingxenye Inombolo 18-3001
Susa izikulufo eziyisikhombisa ezibambe ikhanda lamandla. Kufanele futhi ususe ukuxhumana kwe-mpintsha okuhamba phakathi kwengalo yomtshali kanye nesigwedlo sangaphambi kwesikhathi. Ungahle udinge ukuthi ubambe ngobunono ikhanda lekhanda le-crankcase phezulu ukuze wephule uphawu. Phakamisa lonke ikhanda lamandla bese ulibeka eceleni.
Nqamula mpintsha nokuxhumanisa
Susa Amandla Shona Izikulufu
Phakamisa Powerhead Breaking Seal
Uma ubheka phansi ngaphansi lapho kuhlala khona ikhanda lamandla, ungabona umuthi ophethe ukuxhumana kwe-shift. Kunamantongomane amabili lapho ahlukaniswe nge-washer yokukhiya. Susa lawa manati bese unqamula ukuxhuma kokushintsha. Kungadingeka ukuthi uhambise ishifti uye phambili ukuze uthole ukuxhumana kuhlukane. Ngenkathi ulapha, susa ikepisi lentwasahlobo kanye nentwasahlobo ukusuka phezulu kushaft yokushayela. Qaphela ngoba lezi zingxenye zithanda ukuphuma bese zilahleka.
Susa Shift nokuxhumanisa Nuts
Nokuxhumanisa Nuts Kukhishwe
Ngesinye isikhathi esededelwe, uyofuna ukushintsha out engezansi uwoyela iyunithi. Hamba wenze lokhu manje ingabe ungakhohlwa kamuva. Susa yasenhla nemithombo yasenzansi abakhwabanisi ngezikulufo futhi ukugeleza aphume amafutha ubudala. Izinto elaphuma okwami ​​lalibukeka njengejele esetshenziswa uwoyela motor. Ukuqhubeka esikhundleni aphansi uwoyela unit ne efanele esasinenjini aphansi iyunithi igiya lube. Don sebenzisa uketshezi wokubacindezela njengoba uthi ohlangothini iyunithi aphansi. I Spec salokhu aphansi iyunithi igiya lube kuyinto Lower uwoyela iyunithi: 80 / 90W / OMC / BRP HiVis futhi kungatholakala nje mayelana kuphi.
Upper Drain Intulo
I-Unit Unit Engaphansi
Usebenzisa isikrufu esingu-7/16, susa amabhawodi amayunithi amane aphansi. Donsela iyunithi engezansi phansi. Idrayivu shaft nokuxhumeka kokushintsha kuzophuma neyunithi engezansi. Sebenzisa ithawula elihle noma okunye ukugoqa bese uqinisa iyunithi engezansi ye-skeg ku-vise.
Susa Lowr Unit Bolts
Olicelela Lower Unit
Susa iphini lokugoqa ngaphezulu kwe-drivehaft. Uzokudinga lokhu kususwe endleleni ukuze ukwazi ukususa izindlu ezihamba phambili. Ungayikhiphi idrivehaft eyunithi ephansi ngoba kungahle kube nzima ukuyibuyisela kuyo. Siyaxolisa ngesithombe esiyindida ngezansi.
Susa Roll PIN
Susa izikulufo ezine ezibambelela ezindlini zokuphephela. Phakamisa indawo yempepho ku-drivehaft. I-impeller endala kufanele ibe ngaphakathi kule ndlu. Mina, impeller yayiyizicucu (ingalungile). Susa impeller, hlanza uphinde uqhume indlu yokuhlala. Ngezansi ungabona i-impeller endala ibe yizicucu kanye ne-impeller entsha.
Susa Impeller Cover
Kubi futhi okusha Impeller
Susa ukhiye we-impeller ku-drivehaft. Le ngxenye kulula ukuyilahla futhi kunzima ukuyisusa ukuze uqaphele.
Susa Impeller Key
Susa bese uhlanza ipuleti yokugqoka impeller. Phefumula ngomoya ocindezelweyo ngakho-ke azikho izingcezu ezikhululekile zempepho noma ezinye izinhlayiya zangaphandle ezingabanjwa ezindimeni zamanzi zekhanda lamandla. Shintsha ipuleti lokugqoka.
Hlanza isisekelo se-Impeller
Miselela Water Plate
Beka i-impeller entsha ezindlini ze-impeller. Lokhu kungaba iqhinga elithile. Udinga ukuzungezisa esiphikisayo esiphikisayo ngokwewashi bese ugoba amathebhu, ukuze alingane ngaphakathi kwendlu. Miselela ukhiye wempepho kanye nezindlu futhi uvikeleke ngezikulufo ezine ezibamba indawo yokuhlala impeller phansi. Kubalulekile ukuthi ungakhohlwa ukhiye we-impeller. Ngaphandle kwayo, impeller ngeke ijikeleze futhi ipompe amanzi. Kuleli qophelo godu buyisela iphini yokugoqa ngaphezulu kwesondo lokushayela.
Beka Impeller ku Ezezindlu
Miselela Impeller Key futhi Ezezindlu
Ngenkathi uniyunithi engezansi icishiwe, hlanza futhi uphume konke ongakwenza kufaka ithubhu lamanzi elithatha amanzi asuka ezindlini ezihamba ngenkani iye ekhanda lamandla. Beka ijazi elincanyana le-silicone endaweni yokuhlangana yunithi engezansi ngaphambi kokuyibuyisela phakathi nendawo. Kungadingeka ukuthi uhambise iyunithi engezansi ukuze uthole i-drivehaft nokushintsha ukuxhumana ukuze ukondle emuva nge-midsection. Bolt iyunithi engezansi ivuliwe ngama-bolts amane kanye ne-7/16 wrench.
Luhlanganise Lower futhi Midsection
Namathisela Unit Lower
Buyisela esi, phuca pin, Cotter pin, kanye cap esi.
Buyisela esi kanye pin phuca.
Miselela Cotter pin Prop Cap
Namathisela ukuxhumana kwe-shift. Hlanza bese uqhumisa indawo ngangokunokwenzeka. Shintsha intwasahlobo yedrayivu shaft, ikepisi, ne-washer kushaft yedrayivu.
Namathisela Shift nokuxhumanisa Nuts
Susa ipuleti lokufaka amanzi bese uhlola ngemuva kwalo. Uma kukhona okukhona lapho, hlanza bese ukukhipha. Beka ipuleti futhi ngezimbobo ezibheke ngasemuva.
Amanzi Inlet Screen
Ngenkathi ucisha ugesi, jika ubheke phansi, hlola uphawu lwangaphansi lwe-shaft shaft bese ushintsha uma kunesidingo. Hlanza uphinde uqhume yonke imigudu yamanzi. Manje usungasetha ikhanda lamandla libuyele endaweni yalo bese ugoqa ezikulufo zamakhanda ayisikhombisa zamandla. Qaphela, izikulufo zekhanda lamandla okuhamba phambili kungaba nzima ukuzibuyisela. Icebo engangilisebenzisa kwakungukuthi ngithathe i-silicone ethile ngiyibeke ekhanda le-screw. Beka ikhanda lesikulufu ku-screw drive bese uliyeka lome. Manje isikulufa sizohlala ku-screw drive ukuze ukwazi ukuthola isikulufa emigodini engaphambili yekhanda lamandla.
Miselela Amandla Shona
Namathisela mpintsha nokuxhumanisa
Manje iyunithi yakho engezansi serviced, kanye motor yakho kufanele ugijime cool nge new futha yakho amanzi impeller.